China Rapid Nucleic Acid Extraction Kit mpanamboatra sy mpamatsy | Jianma
[Fampiharana azo ampiharina]
Fehin-kibo nasofaryngeal, tsiranoka lavarangana alveolar, savony hafa amin'ny vatana, sns
Atsofohy ao anatin'ity reagent ity ny famafana santionany ary afangaro → Fanafanana amin'ny 95 ° C mandritra ny 3 minitra → Ny santionany voahodina dia azo ampiasaina ho modely handaminana mivantana ny rafitra fanamafisana.
Haingam-pandeha: ny asa rehetra dia azo vitaina ao anatin'ny 5 minitra.
Fiarovana: ravao haingana ny firafitry ny viriosy ivelany, very ny fahaizan'ny otrikaretina ary ialao tanteraka ny loza mety hitranga amin'ny aretina ambaratonga faharoa, arovy ny fiarovana ireo mpiasan'ny fitsaboana.
Tsotra: Tsy mila centrifuge lehibe sy fitaovana sarotra hafa (swab tsy misy ra).
Fitehirizana: fiarovana tsara ho an'ny RNA, fisorohana ireo lesoka hita maso vokatry ny fahasimban'ny RNA.
[Item No. Ary famaritana]
Karazana S: Fitrandrahana asidra niokleary, 50T / kit
Karazan E: Sampelin'ny fitehirizana tsy mihetsika na fanalana asidra niokleary, 50T / kit
Sary 2 Ny pseudovirus tsy misy fatrany ambany ao amin'ny santionany swab nalaina avy amin'ny vokatry ny orinasa D, ary ny santionan'ny RNA dia simba tanteraka.
Sary 4 Raha ampitahaina amin'ny reagent amin'ny fitrandrahana vakana magnetika Tiangen, ny kitapom-bolan'ny Ct an'ny Jianma Gene haingana ny kitapo fitrandrahana asidra nokleika dia 1 fotsiny, fa ny fotoana fitrandrahana dia nohafohezina 40 minitra.
Ity reagentin'ny fitrandrahana asidra nokleika haingana ity dia afaka mifanaraka amin'ny filan'ny fanangonana santionany, ny tsy fanidiana virus, ny fitrandrahana RNA, ny fitehirizana fotoana fohy ary ny fitaterana santionany.
Previous: Kit ny fikarohana asidra niokleary SARS-CoV-2
Manaraka: Factory nanao varotra varotra China Lab Gradient PCR Instrument Machine Machine Tsara kalitao ambany vidiny
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Kitapo tsy misy fitrandrahana, Kitapo fitsapana haingana an'i China, Canine Parvovirus (Cp), Kitapo fitrandrahana asidra niokleary haingana,